friend | HoLOLo....DiLoLO | Page 3
/* အရမ်းစိတ်ဆင်းရဲနေမယ့် ကျွန်မရဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းလေးရဲ့ကဗျာပါ။ ဘယ်သူ့အတွက်ရည်ရွယ်ထားမှန်းတော့ ကျွန်မကို ပြောမပြပါဘူး။ မတွေ့တာအရမ်းကြာနေပေမယ့် အမြဲတမ်းသူ့ကို ကျွန်မ စိတ်ပူနေတာပါ။ စိတ်လည်းမချဘူး။ သူစိတ်ဆင်းရဲနေမှန်းသိရက် သူ့နားကို ပြန်မသွားနိုင်လို့ အမှတ်တရ တင်ထားလိုက်တယ် သူ့ကဗျာပဲ။*/
နားလည်နိုင်တဲ့ သင်္ကေတတွေ ရှိခဲ့ကြတယ်။
December 8, 2008 by hololodilolo	friend	Leaveacomment
/* ညက စာအုပ်ရှာရင်း ချစ်လှစွာသော သူငယ်ချင်းတွေ ပေးထားတဲ့ တိုလီမုတ်စတွေ ပြန်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီထဲက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကို အမှတ်တရတင်လိုက်တယ်။ ၂၀၀၄ ဆိုတော့ သူအသက် ၁၇ နှစ်ကရေးထားတာပေါ့။ သူ့ကိုတော့ ခွင့်မတောင်းရသေးဘူး။ ခွင့်မပြုလည်း မတတ်နိုင်ဘူး။ 🙂 တင်လိုက်ပြီလေ။ ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး။ */
အော်ရမှာ ပျင်းတဲ့ (ဒီနေ့မျိုးမှာ)
နင့်ကို တကရ် သတိရနေတာပါ။
နင့်ကို တွေ့ရမှ ကမ္ဘာကြီးကို
မသေချာ မရေရာမှုတွေ ပြည့်လို့ပေါ့။
အစာတွေ ကျွေးနေတဲ့ ခပ်ညံ့ညံ့ကောင် ..
တနေ့ .. ငါသေသွားရင်
နင့်မျက်မှန်လေး ငါယူသွားမယ်။ ။
30th Oct ’04 (10:45 PM)
December 2, 2008 by hololodilolo	friend	Leaveacomment
“ဟိုလိုလိုဒီလိုလို”
ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုမှာ ဟိုကိုဒီကို ငေးကြစို့ ။ ။
/* သူငယ်ချင်း ကိုဂစ်တာ ကရေးပေးလိုက်တာ။ ရယ်ရတယ်နော်။ အမှတ်တရ အနေနဲ့ တင်ထားလိုက်တာပါ။ */
October 11, 2008 by hololodilolo	friend, poem	1 Comment
October 11, 2008 by hololodilolo	friend, poem	Leaveacomment
/* ဒီမနက် စာတိုက်ကနေ ရောက်လာတဲ့ ကျွန်မရဲ့ အချစ်ဆုံးသူုငယ်ချင်း ပို့လိုက်တဲ့ကဗျာလေးပါ။ ကဗျာတွေ ၀ါသနာမပါဘဲနဲ့ ကျွန်မအကြိုက်လိုက်ပြီး သူကြိုးစားရေးထားတာနေမှာ။ မွေးနေ့လွန်ပြီးမှ ရောက်လာပေမယ့် အရမ်းဝမ်းသာခဲ့ရပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပါ။ ရေးနေကျမဟုတ်လို့ ဖတ်လို့မကောင်းလှပေမယ့် အမှတ်တရ အနေနဲ့တင်ထားလိုက်တာပါ။ */
သူမနဲ့ကျွန်မဟာ ၁၉၉၅ ကျွန်မတို့ (၄)တန်းကျောင်းသူဘ၀ကစသိခဲ့ပြီး၊ (၈)တန်းကျောင်းသူဘ၀ကစလို့ တတွဲတွဲမခွဲပဲ ရှိခဲ့တာပါ။ တက္ကသိုလ်တက်တော့လည်း တူတူဆိုတော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့။ ကျွန်မမျက်လုံးတချက်အကြည့်နဲ့တင် ကျွန်မဘာပြောချင်လဲ ဆိုတာ သိနေတဲ့သူပါ။ တက္ကသိုလ်တက်တဲ့ ကာလတလျှောက် ကျွန်မရဲ့ နာမည်ပြောင် ‘ဂျက်လီ’ နဲ့တွဲပြီး၊ သူ့ကိုပါ ‘၀မ်ချင်းပေါင်’ လို့ ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။
သူမကို ၂၀၀၆ အောက်တိုဘာလောက်မှာ ထားခဲ့ပြီး၊ ရန်ကုန်ကို ကျွန်မလာခဲ့လိုက်တာ။ ဒီကြားထဲ နှစ်ခေါက်ပဲပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းချစ်ပေမယ့် ဖုန်းအဆက်အသွယ်လည်း မရှိပါဘူး။ စာလည်းအလွန်ရှားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရင်ထဲမှာအမြဲရှိမှန်း သူမရော ကျွန်မပါ သိပါတယ်။
July 5, 2008 by hololodilolo	about me, friend	Leaveacomment
My friend, Xinyaw
Happy Birthday & Many Happy return of the day.
May u be free to update xinyaw13.
December 13, 2007 by hololodilolo	friend	Leaveacomment
Happy Birthday My Dear !!!!!!!!!!
She is my loving friend. We have meet since 1997.
I miss u so much. I can’t phone to u today. Forgive me.
Happy Birthday and Many happy return of the day…………
September 11, 2007 by hololodilolo	friend	Leaveacomment